ဆြာအုပ် နှင့် ဂန္ဓာရီခရီးမှ ဓာတ်သေများ (၁၅) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » ဆြာအုပ် နှင့် ဂန္ဓာရီခရီးမှ ဓာတ်သေများ (၁၅)
ဆြာအုပ် နှင့် ဂန္ဓာရီခရီးမှ ဓာတ်သေများ (၁၅)
Posted by ဂန္ဓာရီ ဆြာအုပ် on Feb 14, 2013 in Photography, Travel | 8 comments
ကရင်ပြည်နယ်ခရီးစဉ် ဘုရင်ညီဂူ ရသေ့ပျံဂူ
လတ်လောင် (16.82276,97.58575) မှာတည်ရှိပါတယ် (လတ်/လောင် ဘယ်လိုကြည့်မလဲ မသိရင် ဂျီင်္အိုတက် မှာကြည့်ပါ)
ကျွန်တော်ရဲ့ ဘားအံခရီးစဉ်ဂန္ဓာရီခရီးမှ ဓာတ်သေများ (၁၀) မှာဘားအံကိုရောက်ပြီး ဂန္ဓာရီခရီးမှ ဓာတ်သေများ (၁၁) မှာ ကျောက်ကလပ်တောင် ၊ ဂန္ဓာရီခရီးမှ ဓာတ်သေများ (၁၂) မှာ ဇွဲကပင်တောင် ၊ ဂန္ဓာရီခရီးမှ ဓာတ်သေများ (၁၃) မှာ ဆဒ္ဒန်ဂူ ၊ ဂန္ဓာရီခရီးမှ ဓာတ်သေများ (၁၄) မှာ ကော့ဂွန်း ကိုရောက်ခဲ့ပြီး နေ့လည်လောက်မှာ ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်.. နာရီဝက်လောက် အကြာမှာတော့ မြင့်မားတဲ့ တောင်ကဘားယံ ကြီးအောက်က ရသေ့ပျံဂူကို ရောက်ရှိကြပါတယ်.. ဆဒ္ဒန်ဂူ နဲ့ ကော့ဂွန်းဂူ ကိုရောက်လာခဲ့ပြီးပြီမို့ ရသေ့ပျံဂူရောက်တဲ့ အခါမှာ တော့ နဲနဲလဲ ပြိုင်းနေတာကြောင့် စိတ်သိပ်မပါတော့ ပါဘူး
ရသေ့ပျံဂူက တောင် အပေါ်ဘက်ကို ထပ်တက်ရသေးတာ မို့လို့ တော်တော်လေးကြိုးစားပမ်းစား တက်လိုက်ရပြီး လျှာတောင် တော်တော် ထွက်သွားပါရဲ့.. ဂူပေါက်ကိုရောက်တဲ့ အခါမှာ တော့ ရင်ပြင် ကနေ တဆင့်မြင့်တဲ့ နေရာမှာ စေတီလေးတဆူတည်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်. လှေခါးထစ် ၁၀ ထစ်လောက် ဆက်သွားရင် စေတီတော်လေးရဲ့ ရင်ပြင်ကို ရောက်ပါတယ်.
.တက်လာတဲ့ ဘက်နဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် ရင်ပြင် နောက်တဘက်မှာ တော့ စေတီတော်တည်ထားတဲ့ ကုန်းအောက်ခြေကို မြင်ရပါတယ်.. စေတီတော်ရင်ပြင်ကို မတက်ဘဲ နဲ့လဲ အောက်ခြေက ပတ်သွားရင် ရောက်ပါတယ်.
အဲဒီမှာ နဲနဲပါးပါးရိုက်ပြီး ပြန်ကြပါတယ်.. ဗိုက်ကလဲ ဆာနေကြတာကြောင့် သိပ်မရိုက်ချင်တာရယ် 4GB ကတ်ကို ခြွေရိုက် နေရတာကြောင့် သိပ်ပြီး မရိုက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး.. အပြန်မှာ တော့ နေ့လည်စာ ထမင်းကို ထမင်းဆိုင်လေး တစ်ဆိုင်မှာ ၀င်ကြိတ်လိုက်ကြပါတယ်.. ၀ိုင်းစားလိုက်ကြတာ ထမင်းဆိုင်လေးခမျာ ရှိသမျှ ထမင်းရော ဟင်းရော ပါပြောင်သွားရှာပါတယ်။
စားပြီးသောက်ပြီး မှာတော့ ထွက်လာလိုက်ကြတာ final destination အဖြစ် (ရုပ်ရှင်မဟုတ်ဘူးနော်) ဘုရင့်ညီဂူကို ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်. မနွယ်ပင် post မှာလည်းဖော် ပြထာြး့ပီးသားမို့လို့ သိပ်တော့ မပြတော့ပါဘူး။ ကရင်ပြည်နယ်ခရီးစဉ်ကြီးကလဲ ပြင်းလာတာကြောင့် ဘုရင်ညီဂူကို ဒီ post ထဲမှာပဲ ပေါင်းထည့်လိုက်ပါတယ်။
လတ်လောင် (16.970411,97.493565) မှာတည်ရှိပါတယ်၊ ဂူတွေထမှာတော့ ဒီဂူက အဆင့်မြင့်ဆုံး၊ မရောက်ခင် မုဒ်ဦးရှိပြီး
မုဒ်ဦးက ၀င်လိုက်တာနဲ့ သစ်ပင် တန်းလေးရှိသည်။ သစ်ပင်တန်းလေး လွန်လိုက်ရင်တော့ နာမယ်ကျော် ရေပူစမ်းရှိသည်။ ရေချိုးနိုင်ပြီး ယောက်ကျား တစ်ကန်၊ မိန်းမ တစ်ကန် ဖြစ်သည်။
ရေပူကန် ယောက်ျားရေချိုးကန်၊ မိန်းမရေချိုးကန်ကတော့ ညှင်းညှင်း ပြဘူး
ရေကန်။ ဘယ်ဘက်တွင် မိန်းမရေချိူးကန်
ကန်ကိုကျော်ပြီး မှ ဂူကို တက်သည့် လှေကားထစ်လေးများကိုရောင်သည်။ အပေါ်တက်သွားရင်တော့ ထုံးစံအတိုင်း
အဲဒီမှာ ဓာတ်သေရိုက် ပြန်ဆင်း ပြီးတော့ ပြန်လာ ရန်ကုန်ရောက် ဒါပဲဗျာ။။နောက်တင်မယ့် post ကတော့ ဖိုကြားဆင်စခန်းခရီးစဉ် ဖြစ်ပါတယ်.
အင်းပြင်လိုက်ပါပြီဗျို့ first comment အတွက်ကျေးကျေးပါ
ရေပူကန် ပုံစံ က သာမန်ရိုးရိုးရေကန်လိုပဲနော
ဘယ်လောက်ထိ ပူလဲဗျို့ 
အဲ့ဘက်တော့ သွားလည်ဖို့ အိုက်ဒီယာရမိတာ ဆြာအုပ်လမ်းညွှန်လို့ 
ခေါင်တိုင်က ရေပူစမ်းကတော့ ကြက်ဥတောင်ကျက်တယ် အငွေ့တထောင်းထောင်းနဲ့
အဲတာကြောင့် ဟိုတယ်က ဖွင့်လုပ်ပေးထားတဲ့ ရေစိမ်ကန်ထဲမှာရေ ပြန်ရောထားရတယ်
ဖိုကြားဆင်စခန်း ကို ပိုစိတ်ဝင်စားတယ် ။
ဓါတ်ပုံနဲ့တကွ ပြောပြတော့ ရောက်သွားသလိုပါပဲ….